Amanzi aseCopper Foot, ama-Crystal Chandeliers, ama-Kitchen Sinks, Kitchen Bowls
Amanzi eBopper Foot
Iibhokhwe zokulala zeCopper
I-Copper Kitchen Sinks
I-Basket Crystal Chandeliers
Senzele ngoku + 20 100 222 4297
Akukho mveliso kwinqwelo
Amanzi eBopper FootI-Copper isetyenziselwa ikakhulu kwiindawo zokunakekelwa kwezempilo, apho iindiza ezinobungozi, iibhaktheriya kunye neefungi zikholisa kwaye ziqhubekeka kwii-cookie, i-railings, iitafile zeetray, i-tap (ipaucet) kunye nezinye izixhobo kunye nezixhobo. I-Copper ibonise ukuba ukungcoliswa kwe-antitimicrobial anti-contamination I-Copper iyaqhubeka ibulala ibhaktheriya, ayize igule, kwaye ikhuselekile ukuyisebenzisa njengemibhobho yobhedu ukukhusela ukukhonza njengamaqonga okusasazeka kwe-microbes. Ezi nyibiliki zihlala ziphila kwiindawo ezide ixesha elide.
I-Basket Crystal ChandeliersUbuncwane bensimbi yebhasikidi
I-Basket Crystal Sconcesi-crystal-wall-sconces
Izibilini zokuSasaza ngeeSouth Spa
Iingxube zeehayile zetsimbi
Iipopu zeThebula zeCopper
Iibane zokuKhanya kweC Kitchen
Ikhompyutheni yeCopper ifaka
Iibhondi zamaBhondi zeCopper
Wenza iibhonki zeNsimbi
Yenza iLone iLorne
Iimveliso zeCopper ezenziwe ngezandla, iiLampu kwiiMpahla eziPhambili
Abaculi bethu basebenzisa izinto ezisetyenzisiweyo kunye nezixhobo zokuqala zehlabathi ezilula zokunika izitya zethusi, i-Crystal Chandeliers, ii-Kitchen Sinks, i-Kitchen Bowls, iipopu, iintambo ze-iron kunye ne-antic replica yezandla zokuthengisa izitayela zekhaya kunye negadi. Inkqubo ifana namaYiputa aseMandulo aphezulu kwizakhiwo zobugcisa kunye nobunjineli bokwakha. Akumangalisi ukuba intlambo yeNayile yindlu yendoda eyenziwe iipramramid kunye ne-sphinx eziphakathi kwezakhiwo ezidumileyo kwimbali.
I-A1 IYiputa igxininisa kwi-spa ye-copper zokuhamba ngeenyawo ezinyawo, i-crystal chandeliers, yokuhlambela, phezulu kwetafile, izitya zasekhitshini, ukuhlobisa intsimbi ukukhazimulisa umzimba womntu, ikhaya kunye nomyezo. Amathuba abonisa ukuba uFaro wasebenzisa i-Pedicures ukwenzela unyango unyango kunye nenjongo yobuhle.I-Pedicure yavela kwi-latin igama elithi pedi cura elithetha ukuba unyawo lunakekelwa.Ngoku, ukuhamba ngokugqithiseleyo kusetyenziswa kakhulu ngabasetyhini kuwo wonke umhlaba ukunyamekelwa kwesikhumba, ukusikwa kweenyawo kunye nokunyangwa kwamayeza.
Amanzi aseCopper Foot, ama-Bathroom Sinks, Tops
Abachwebi bethu baseYiputa bawubhedu obhetele kwi-Mediterranean. Isitya sokulala kunye nekhishini izitya zethusi zethusi zenziwe ngesandla, zinyunyiweyo kwaye zifakwe njenge-Over mountain, phantsi kweentaba okanye kwiitya zixhomekeke kwiimpahla zokuhamba okanye iifenitshala ezingenanto. Ubhedu bethu bugqityiwe bokuqala, ukutshiswa komlilo, ukuphosa, i-pattic antitic, i-nickel etyhila i-verdigris.
I-Copper iyakhathazeka kakhulu ekuqhubeni ukushisa, isasaza ukushisa ngokulinganayo kwaye igcina amandla. I-cooker cookware ivela kwindawo yangasese engenanto okanye i-tin ehlanganiswe ngokubhekiselele kuhlobo lokutya.
I-Antique Vintage Basket Crystal Landeliers
Imveli yethu yaseFransi I-Crystal basket Iqokelelo lamathandeli iqulethe amawaka amabhontshisi amancinci aya kubonakalisa isitayela somninikhaya ukuze athole isona esona sandla esilungileyo esenziwe kwiindawo zokukhanya emhlabeni. Izalwimi zethu ze-antique zaseFransi zensimbi ezenziwe ngensimbi ayifani nantoni na.
Ukuthengiswa kweMveliso eyenziwe ngokwezifiso
Isandla sethu senziwe umgca sigxininisa kubathengi bethu, abathengisi be-antitique, abahlobisi, abanikazi beevenkile, abaculi, abakhontrakthi, abakhi bezinto zangaphakathi, abakhi bezakhiwo, abakhi kunye nabaninikhaya. Sisebenzisa ithusi, i-aluminium, isinyithi esenziwe, i-crystal kunye neglasi ukwenzela ukwakha izinto ezicacileyo. Iimveliso zethu zenze iqokelelo lwezixhobo ezahlukileyo ukubonelela ngeyona nto yokuzonwabisa.
Sinika ubuqhetseba zonke iimveliso kwaye sisasaza ngqo kubathengi bethu kunye nokuthengisa. Sinokubonelela ngeziko ukwenza ubukhulu, imilo, imibala, ukugqiba, iipostiki kunye neenkonzo nganye ngesicelo ngasinye.
Sithumelele i-imeyile kwaye siza kubuya kuwe, njenge-asap.
© 2018 · a1egypt.com, onke Amalungelo Agciniwe